warkii.com » Halkay Kala Joogeen Shan Sano Ka Hor Ciyaartoyda Liverpool Ee Koobabka Muhiimka Ah Ugu Soo Guulaystay ?
Halkay Kala Joogeen Shan Sano Ka Hor Ciyaartoyda Liverpool Ee Koobabka Muhiimka Ah Ugu Soo Guulaystay ?
Haddii aad shan sanadood aad taageerayaasha Liverpool u sheegi lahayd in ay ku wada guulaysan doonaan Champions league, Club World Cup iyo Premier league oo ay sidaa ku noqonayaan Championska aduunka, Championska Yurub iyo Championska England waxay jamaahiirta Reds ku sheegi lahaayeen sidii in aad waalan tahay oo kale kadib dhibaato badan oo kooxdooda soo martay.
Laakiin hadda waxay jamaahiirta Liverpool arkayaan dhamaan saddexda koob ee Yurub, England iyo aduunka oo ay kooxdoodu haysato balse halkay joogeen ciyaartoyda Reds guulahan soo gaadhsiiyay shan sano ka hor?
Halkan ayaanu idiinku soo koobnay dhamaan ciyaartoyda Liverpool koobabkan ka soo caawiyay halkii ay joogeen shan sano ka hor waxaana ka muuqata arimo qariib ah.
Ciyaartoy hadda Liverpool lama taabtaan ka ah ayaa joogay kooxo aan magac lahayn halka kuwo kale ay ahaayeen da’yar aan magacooda la aqoon. Haddaba halkan kaga bogo halkii ay joogeen ciyaartoyda Reds koobabka ka soo caawiyay sanadkii 2015 kii.
Alisson ayaa shan sano ka hor joogay kooxda dalkiisa Brazil ee Internacional kadib waxa uu sanadkii 2016 kii ku soo biiray Roma oo ka soo bixisay 7.5 milyan gini waana kooxdii uu Liverpool u soo maray.
Adrian – West Ham- waxa uu ahaa goolhayaha kowaad ee West Ham United.
Trent Alexander-Arnold – Liverpool- waxa uu ahaa 16 sano jir kooxda da’yarta u ciyaara.
Virgil van Dijk – Celtic- waxa uu ka tirsanaa kooxda reer Scottland ee Celtic wuxuuna kadib xili ciyaareedkii 2014/15 kii uu 13 milyan ugu biiray Southampton oo ahayd kooxdii uu Liverpool uga soo wareegay.
Joe Gomez – Liverpool- waxa uu joogay kooxda Charlton oo uu Liverpool kaga soo biiray isaga oo 18 sano jir ah markaas oo ay Reds ka bixisay 3.5 milyan gini kaliya.
Dejan Lovren – Liverpool- waxa uu Liverpool markaas ugu soo biiray 20 milyan isaga oo Southampton ka soo wareegay.
Joel Matip – Schalke-waxa uu joogay kooxda reer Germany ee Schalke 04.
Andy Robertson – Hull City- Waxa uu ka tirsanaa Hull City wuxuuna Liverpool ugu soo biiray 8 milyan oo kaliya kadib waxa uu noqday difaaca bidix ee ugu fiican.
Jordan Henderson – Liverpool-Waxa uu joogay Liverpool tan iyo 2011 kii waana tan iyo markii uu 16 milyan ugu soo wareegay.
Fabinho – Monaco- Waxa uu joogay AS Monaco oo ay Liverpool kaga soo iibsatay 39 milyan gini.
Gini Wijnaldum – PSV- waxa uu joogay kooxda dalkiisa Holland ee PSV waxaana ka soo qaadatay Newcastle United oo ka soo bixisay 14.5 milyan gini laakiin Liverpool ayaa 25 milyan kula soo wareegtay markii ay Necastle heerka labaad u dhacday.
James Milner – Liverpool-Waxa uu isla sanadkii 2015 kii uu Liverpool uga soo wareegay Man City oo uu si xor ah uga soo dhaqaaqay.
Adam Lallana – Liverpool-waxa uu joogay Liverpool kadib markii uu Reds 25 milyan ugaga soo wareegay Southampton wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoyda dhawrka ah ee shan sano ka hor Reds joogay.
Naby Keita – RB Salzburg
Takumi Minamino – RB Salzburg
Xherdan Shaqiri – Inter Milan
Mohamed Salah – Fiorentina (waxa uu ahaam kaga maqnaa Chelsea)